Ndeipi Inonyanya Kutengeserana yeWebhu Zvigadzirwa Zvokushandisa? - The Semalt Anwer
nzvimbo dzakasiyana. Zvishandiso izvi zvinobatsira zvikuru pakutanga, ma-bloggers, freelancers uyewo kumabhizimisi ezvokutengeserana uye makuru. Vanogona kutyora kana kudonha deta manyore kana kuti zvinongotanga, kutora ruzivo rutsva uye rwepo uye ruchengete kuti ruve nyore kuwana - how to check google analytics reporting.
Bixo ibasa rekutengesa webhu uye data scraping tool . Ndiyo yakasununguka yakawanda inobva kune web mining toolkit iyo inotanga sezvikamu zvakasiyana-siyana zvepascading mapipu uye inovaka mashoko akafananidzwa pamusoro pako, kuitora kubva kune dzimwe nzvimbo. Unogona kuishandisa kwebhizimisi rako duku uye guru uye chengetedza dheseti inobatsira pane dambudziko rako rekutsvaga nechokunyanya.
DEiXTo inonziwo AEiXTo. Icho chimwe chezvinhu zvakasimba zvikuru uye zvakakurumbira zvekushandisa zvinyorwa zvinoshandiswa zvinobva pane zvakakwana W3C Document Object model. Iko inokubvisa kuti uwane durama rakarurama uye unogona kuronga mafaira ako mufomu realfabhethi. Zvinokupa nyore kuwana kune zvakasiyana-siyana zvekusarudza. Kunze kweiwo, unogona kuronga nguva uye sei yekuchera mawebsite. Inopedza nguva yakawanda, kushanda, uye simba.
Chimiro ndechimwe chezvinotonhora uye zvakanakisisa zvekutengesa web web scraping uye mapapurogiramu mapurogiramu. Icho chinonyanya kushandiswa kwemasiti ekutsvaga webhuti yevashandi vePython uye ine zvishandiso zvine chokuita ne Wikipedia API, Google, HTML DOM parser uye Twitter. Haisi kungotsvaira uye kunokamba nzvimbo dzako asi inoitawo data inoshanda uye inogadzira mafaira maererano nezvinodiwa.
Scrappy ibasa rekutsvaga webhutira yezvigadzirwa zvinouya nemasimba akazaruka uye masangano anobatanirana. Inobatsira kutora data kubva kumawande maduku uye makuru. Vashandi vanongogadzirisa mitemo yekutora deta uye vanobvumira Scrapy kuti iite zvese. Iyo yakanyorwa muPython uye inomhanya pa BSD, Mac, Windows, uye Linux.
Inogona kutora mapeji emamaneti mashanu mamiriyoni mukati meawa, uye purogiramu yacho yekutanga inopa hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hwehupfumi hunoita 12 000 URL. Zvisinei, mushanduro waro wepakutanga wakanaka kune zvekutengeserana uye inodhura madhora makumi mana pamwedzi.